Tartanka horyaalka Spain ee la liga oo dib u bilaabanaya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Tartanka horyaalka Spain ee la liga oo dib u bilaabanaya
Ra’isal wasaaraha Spain, Pedro Sanchez, ayaa sheegay in tartanka horyaalka kubadda cagta La Liga ee dalkaasi dib u furmi doono laga bilaabo 8 Juun hase yeeshee aan taageerayaasha loo ogolaan doonin in ay garoonnada tagaan.
Gudoomiyaha xidhiidhka tartankaa agaasimaha, Javier Tebas, ayaa sheegay in uu rajaynayo inuu tartankaasi furmo 12 Juun, inkasta oo aan weli maalin cayiman loo qaban bilowgiisa.
Ciyaartoyga La Liga ayaa todbaadkan bilaabay tabobarrada ay isugu diyaarinayaan ciyaaraha oo aanay toban qof wax ka badan markiiba meel wada joogi karin.
“Spain wixii ay qaban kari lahayd way qabatay haatanna waa cusub baa u beryaya qof kasta. Waxa la gaadhay goortii hawl maalmeedkii caadiga ahaa lagu noqon lahaa” ayuu yidhi Sanchez.
Waxaanu intaa ku daray “laga bilaabo 8 Juun, La Liga dib uu furmi doonaa. Ciyaaraha kubadda cagta ee Spain waxay leeyihiin taageerayaal badan hase yeeshee keligood noqon maayaan waxyaabaha madadaalada ah ee dib u bilaabmi doona”.
Heerka labaad ee ciyaaraha kubadda cagta dalkaas ayaa sidoo kale la filayaa in ay dib u bilaabmaan isla wakhtiga horyaalku bilaabmi doono. Waxaanay wararku tibaaxayaan in ciyaarta u horraysaa noqon doonto mid adag oo ay gorrodda isku dari doonaan labada kooxood ee isku magaalada ah ee Sevilla iyo Real Betis .
“Aad baanu ugu faraxsannahay go’aankaas” ayuu yidhi Tebas. “Waa natiijo ka dhalatay hawl adag oo ay galeen kooxaha, ciyaartoyda, tabobarayaasha iyo golaha isboortiga. Laakiin foojinnaanta meesha ka saari mayno, waxaana muhiim ah in la raaco xeerarka caafimaadka si aan cudurku dib inoogu laba kaclayn” ayuu ku sii daray.
Ciyaaraha kubadda cagta ee Spain waxa 12 Maarij loo hakiyey saf-marka korona awgii.
Ciyaartoyga labada heer ee sare ayaa loo ogolaaday in ay tabobarradoodii shakhsiga ahaa bilaabaan horraantii bishan May ka dib markii laga baadhay fayraska.
Shan ciyaartoy ayaa laga helay fayraska guud ahaan ba ciyaartoyga Spain iyaguna waxay isku karantiimeeyeen guryahooda muddo oo markii dambe waxa loo ogolaaday inay ka soo baxaan 18 May.
Tartanka hoyaalka waxa ka hadhsan 11 ciyaarood xilli ciyaareedkan waxaana hogaanka u haysa kooxda Barcelona oo laba dhibcood ka horraysa kooxda Real Madrid.
Dhanka kale horyaalka Portual ee Primeira Liga ayaa isna dib u bilaabmi doona 3 Juun, oo waxa ciyaarta ugu horraysaa dhex mari doontaa kooxaha Portimonese iyo Gil Vecent halka Famalicao iyo Porto oo hogaanka haysaana gorrodda is dari doonaan.
Porto waxay kooxda xafiiltanka weyni dhex yaal ee Benfica ka horaysaa dhibi keliya waxaana hadhsan 10 ciyaarood.
Previous articleTirada dadka laga helay Coronavirus ee Soomaaliland oo korortay
Next articleDhageyso:-Guddoomiye Cali Jeyte oo dowladda ku eedeeyay inaysan soo gaarsiin Qalabka COVID-19
Waxaa Warmurtiyeed laga soo saaray shirkii Madaxda dowlad Goboleedyada uga socday Magaalada Dhuusamareeb labadii Cisho ee la soo dhaafay,kaas oo ka kooban Shan qodob...